Ny fitaterana entana irery ihany sisa afaka mandeha. Hapetraka ny “barriière sanitaire” manerana an’Antananarivo sy manerana ny Nosy. Ireo toeram-pivarotana ny entana andavanandro ihany no misokatra: super-marché, Grossites, epicérie, tsenam-pokontany (6 maraina -12 ora atoandro); Ny fivarotam-panafody, solika, banky dia misokatra. Mihantra ny tsy fahafaha-mivezivezy amin’ny alina amin’ny 8ora alina-5 ora maraina. Mikatona avokoa ny sampan-draharaham-panjakana ankoatra ny Fitsarana, fahasalamana filaminam-bahoaka. Ny Jirama, haino aman-jery, toeram-panaovan-gazety dia misokatra ihany koa. Anjaran’ny mpampiasa no mandrindra sy mametraka lamina ho an’ny orinasa tsy miankina hahafa-mandrindra azy manaraka ny lamina napetraka. Antananarivo, Analamanga ary toamasina aloha hatreto no mihantra ny fepetra, fa ho avy ny an’ny faritra, arakaraka ny zava-misy. Hiara-Hiasa sy mametraka amin’ny governora, prefe, ben’ny tanàna,… ny fanatanterahana izany.
Somary mampametra-panontaniana etsy andaniny ny mahakasika ireo mpiasan’ny hopitaly. Misy fepetra manokana raisin’ny fanjakana ve amin’ny fitaterana azy ireny? Manomboka maro mantsy izy ireo nametra-panontaniana taorian’ny fanambaran’ny filoha. Asa lehibe no miandry azy ireo eo anatrehan’ny zava-misy.